नगर पिता मेयर सापलाई पत्र - Samadhan News
नगर पिता मेयर सापलाई पत्र
समाधान संवाददाता २०७६ फागुन १२ गते १५:३७
आदरणीय मेयर साप नमस्कार
प्रजातन्त्र लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्मको उपलब्धिमा तपाईं र तपाईं जस्तै नेतासँग हामी सधैं सगैं थियौं भन्ने यहाँलाई थाहा नै छ । समाजको एउटा सचेत वर्ग भएका कारण व्यवस्था परिवर्तनका हरेक मोर्चामा हामी तपाईं सगैं थियौं व्यवस्था परिवर्तन सगैं अब रुपान्तरित परिवेशमा शिक्षाको अवस्था परिवर्तनको लडाईंमा यहाँकै निर्देशन अनुसार दिन रात खटिरहेका छौं । गणतन्त्र नेपाललाई संस्थागत गरी नयाँ नेपाल निर्माणका लागि बनेको नेपालको संविधान २०७२ ले हामी शिक्षकलाई जवरजस्त तपाईंको सरकारभित्र समायोजन गरेको पनि यहाँलाई थाहा नै छ ।
एउटा नगरपिताका रूपमा जनताको कामको नेतृत्व गर्ने अवसर यहाँले पाइरहँदा हामी खुसी थियौं कि शिक्षण पेसासँग नजिक पुरानो खारिएको पूर्व शिक्षक तपाईंको नेतृत्व कुशलताको केही लाभ हामीलाई प्राप्त हुनेछ । हामीलाई अत्यन्त प्रेमभावले हेर्नुहुनेछ । तर तपाईंको नेतृत्वको आधा समय बितिसक्दा समेत तपाईंसँग हामीले गरेका ती आशा निरासामा बद्लिए । तपाईंको नेतृत्वभित्र काम गर्ने राष्ट्रसेवक मासिक तलब र राम्रो प्रोहत्साहन भत्ता बुझ्दा हामी काम गरेको तलब बुझ्न ६ महिना कुर्नुपर्छ । दसैंमा तलब पाउँ हजुर भनेर हजुरको ढोकामा जानुपर्छ, मानौं वर्षभरी हलो जोत्ने हलिले बराजुको ढोकामा मुजुरी मागे जस्तै । यस्तो सौताने व्यवहार हामी शिक्षकलाई भयो किन मेयर साप ? १÷२ पटक ससाना शिक्षकका सभामा हजुरले भन्नु भएछ, अब शिक्षकले मासिक तलब खान पाउँछन्, अखबारका पाना पढेर म जस्तै थुप्रै शिक्षक दंग परेका थियौं ।
शिक्षक नेताले ठूलो उपलब्धि सम्झेर फेसबुकमा लेखे अब अर्को महिनादेखि शिक्षकले मासिक तल पाउने । मानिलिनोस्, तपाईं नगरपिता हैन, एउटा घरको प्रमुख पिता, तपाईंका छोराछोरी श्रीमती घरपरिवारमा अफ्ठारो पर्दा खर्च जोहो गर्नुपर्दा, बिरामी पर्दा खर्च ४ महिना पुगेपछि गरौंला भन्न सक्नु होला ? संसार मासिक तलब हैन साप्ताहिक तलब दिने संस्कारमा जाँदैछ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र चलायमान हुन मासिक हैन साप्ताहिक तलब दिनु पर्ने विश्व परिवेशमा तपाईं हामीलाई ५ महिना पुग्दा समेत तलब दिनुहुन्न । विचरा हामी शिक्षक न स्थानीय प्रदेश संघ रोज्ने फारम नभराई स्थानीयमा ग्रेड थप नगरी चुपचाप काम ग¥यौं ।
न त हाम्रो कुनै पनि प्रकारको भत्ता सुविधा नै हुन्छ, न त अफिस को काममा जाँदा टिएडिए प्राप्त हुन्छ, न तहगत बढुवा पाउँछौ । कक्षा इसिडीदेखि १२ सम्म विद्यालय संरचनामा आउँदा एउटै छाना मुनि बस्ने शिक्षक मासिक ६ हजारमा काम गर्छन् । २४ हजार पाउन ४ महिना कुर्नुपर्छ । एउटा पदलाई १७ प्रकारका सेवा सर्तमा बाँडिएको पेसा हो । हाम्रो उधारोमा काम गर्ने हलिले बारीमा बाँझो राह्टो छोड्यो भने हलि फेर्ने हो नभन्नु होला । हजुरलाई राम्रोसँग थाहा छ, एउटा शिक्षकको उसको तलबबाहेक अतिरिक्त कमाई हुन्न । त्यस्तो अवसर पनि हुन्न हाजिर मात्रै गरेर तलब पाक्ने अन्य कामका लागि अतिरिक्त लाभ प्राप्त नहुने पेसा हो हाम्रो । ४ महिना पछि तलब आउँछ भनेर उधारो बेच्नेले वाक्क दिक्क भइसके अब ।
तलब बुझेको ५ औं महिनापछि उधारो माग्ने ठाँउ, सापटी माग्ने ठाँउ पनि सकिएपछि मेयर सापलाई यो प्रेमपत्र लेखे पैसाले गरिब भए पनि मनमा अझै आगाध प्रेम छ, यो मन र मुटुमा भर्खरै सकिएको प्रणय दिवसको शुभ कामनासहित यहाँसँग बिदा हुन चाहन्छु ।
उही तपाईंको शिक्षक